Author: Jum Gazshura
Mowduucyada la xiriira Soomaaliya.
Mabaadi’da talo-wadaagga iyo hannaanka xisbiyada badan. Darnmaanad-qaadista lahaanshaha gaar ahaaneed iyo xaq dhowridda suuqa xorta ah.
Taliyayaasha ciidamada iyo Ku-xigeenadooda. Khiyaamo Qaran High Treason ama t. Magacaabidda iyo xil-ka-wareejinta xubnaha Golaha Wasurada. Xukuumaddu waa in ay dhiirri-gelisaa xeerna ka soo saartaa xaqa ay haweenku u leeyihiin in ay ka xoroobaan dhaqamada aan Shareecadda waafaqsanayn ee waxyeelada u leh jidhkooda iyo damurkooda.
Waxa xeerarka degdegga ah dib-u-eegid ay 2da Gole ku samayn doonaan saddexdii 3 biloodba hal mar iyaga oo go’aankoodu ku salaysnaan doono codka hal dheeriga ah Simple Majority.
In Ia daabaco lacag, lana soo saaro shahaadooyin rahmadeed, iyo kuwa kale oo leh qumo dammaanadeed. Guddida Culimadu waxay ka kooban yihiin kow iyo toban 11 xubnood; muddada xilkuna waa shan sanno 5 ; xubintii mutaysatana dib baa loo soo magacaabi karaa.
Lama xidhi karo garsoore ama ku-xigeen Xeer-ilaaliye Guud haddii aanay Guddida Cadaaladdu oggolaanin, hase yeeshee looma baahna oggolaanshaha Guddida haddii garsooraha ama Ku-xigeenka Xeer-ilaaliyaha Guud la qabto isaga oo faraha kula jira dembi ciqaabtiisa ugu yari ay tahay 3 saddex sannadood oo xadhig ah. Maqal Soomaalida Minneapolis oo ka faa’ideysaneysa miisaniyadda ka Soomaalida Minneapolis oo ka faa’ideysaneysa miisaniyadda ka. Baarlamaanka iyo Fadhiyada Wada Jirka ah.
Sidaa darteed, cashuur ama takaaliif aan xeer jidayn lama qaadi karo. Haddli loo baahdo hay’ado kale waa la dhisi karaa si xeerka waafaqsan. Qof kasta waxa waajib ka saaran yahay daryeelka, ilaalinta iyo badbaadada deegaanka.
Awoodda Xeer-dejinta ee Golaha Wakiilada. Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada. Madaxweynuhu dalka kama maqnaan karo 45 cisho oo isku xiga muddo ka badan sabab caafimaad mooyaane. Waxa waajib ah inuu oggolaansho Golaha Wakiilada ka helo qof kasta oo loo magacaabo Wasiir, Wasiir-ku-xigeen, iyo Madaxda Hay’adaha Dawladda, iyadoo la raacayo Dastuurka. Tilmaanta Guud ee Golaha Guurtida. Shaqaalaha kale ee ka shaqeeya Garsoorka waxay hoos imanayaan xeerarka shaqaalaha Dawladda.
Guddoomlyaha gobolka waxa soo magacaabaya Xukuumadda, waxaana uu uga wakill yahay Xukuumadda-dhexe gobolka iyo degmooyinka hoos yimaada. Madaxweynuhu waa madaxa Qaranka iyo Dawladda; waana astaanta midnimada muwaadiniinta ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland. Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan.
Khilaafka Diiniga ah ee abuurma. Qofka xorriyadda looga qaaday fal-dembiyeed lagu eedeeyey awgeed, waxa uu xaq u Ieeyahay in lagu hor geeyo maxkamad 48 siddeed iyo afartan saacadood gudahood, laga bilaabo marka Ia qabtay. Gudidda Cadaaladdu waa hay’adda hoggaamisa maamulka Garsoorka, waxayna ka kooban tahay: Garsoorka Garsoorka ee Somaliland. Masuuliyiinta Qaranka ee Dastuurku waajibiyay in la ansixiyo, si ku-meel gaadh ah xilka uma hayn karaan muddo ka badan saddex bilood.
Xubnaha Golaha Wakiiladu waxay yeelanayaan mushahar iyo gunno xeer qeexo. Khayraadka dabiiciga ah ee dalka waxaa mas’uul ka ah Dawladda-dhexe, waxaanay qaadaysaa tallaabo kasta oo suurta gal ah si loo baadho, loogana faa’iidaysto khayraadka ku dqstuurka berriga iyo badda dalka. Shuruuradaha Qofka lsu Taagaya Doorashada. Haddii Madaxweynaha iyo ku-xigeenka Mad axweynaha lagu oogo dembiyada kala ah: Inay ku tilmaanaadaan xisbi siyaasadeed ama urur gaar ah oo Diineed.
Golaha Wakiiladu waxa uu ka doodi karaa, waxna ka beddeli karaa miisaaniyadda, kuna ansixinayaa go’aan Gole. Dacwadaha aan ciqaabta ahayn waa lagu oogi karaa xubinta Golaha Wakiilada iyadoo aan oggolaanshaha Golaha Wakiilada loo baahnayn. Habka Buuxinta Jagada Bannaanaatay.
Waxa xubinta tallaabo laga qaadi karaa haddii Iagu qabto isagoo dembi faraha kula jira; markaana waxa waajib ah in Golaha si deg-deg ah loo ogeysiiyo. Xaqa Dacwadda iyo lsdifaaca. Eedaysanuhu waa dembi-laawe inta aanu maxkamad horteed kaga caddaanin dembi.
Next story BLANDINGS CASTLE AND ELSEWHERE PDF
Previous story EL LIBRO BLANCO DE RAMTHA PDF